पोखरा,कात्तिक ३ । दशैंयता पोखराका तालतलैया, गुफा, धार्मिकस्थल अधिकांश स्थानमा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल देखिएको छ । कोरोना विपद्का कारण झन्डै २ वर्षयता सुनसान बनेको पोखरामा पर्यटकको आगमन बढ्न थालेसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि आशा जगाएको छ । फेवातालमा डुङ्गा शयर होस् वा आसपासका सराङकोट, काहुँकोट, विश्वशान्ति
प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवर्द्धन : के भन्छन् सरोकारवाला ?
वीरगञ्ज,कात्तिक २ । प्रदेश २ को आर्थिक विशेषतामा कृषि र उद्योग व्यवसायको सन्दर्भ अगाडि आउँछ । कृषिको भण्डार र बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर समेटिएको यो प्रदेश उत्पादन र आपूर्तिको केन्द्र
हेटौंडा,असोज १८ । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलाशय इन्द्रसरोवरको सतह बढेपछि कुलेखानी खोला वरपरका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ । जलाशय क्षेत्रमा भइरहेको वर्षाका कारण आइतबार मध्याह्नबाट जलाशयको सतह बढेर
‘अनअराइभल भिसा’को व्यवस्थाले पर्यटक आगमनमा सुधार
काठमाडौं,असोज १८। नेपालमा पछिल्ला दिनमा पर्यटक आगमनमा झिनो सुधार देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारीको जोखिमकै बीच सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि लागू गरेको नयाँ व्यवस्थाका कारण पर्यटक आगमनमा सकारात्मक प्रभाव परेको
पर्यटन काज बिदा : कर्मचारीसँगै घुम्न जानेलाई खर्च दिने गरी मस्यौदा तयार
काठमाडौं,असोज १८ । कोरोना भाइरसबाट थलिएको पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि ल्याएको १० दिने काज बिदा कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिएको छ । कर्मचारीसँगै घुम्न जाने एकजना गैरकर्मचारी अर्थात् कर्मचारीको पारिवारिक
नाका खुल्दा सीमाक्षेत्रका होटेल व्यवसायीलाई राहत
वीरगञ्ज,असोज १७ । डेढ वर्षपछि नेपाल–भारत सीमानाबाट निजी सवारीसाधनको आवागमन सुचारू भएपछि सीमावर्ती क्षेत्रका होटेल तथा पर्यटन व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । स्थानीयलाई आवागमन सहज भएको छ । यसअघि कोरोना
झोरवासीलाई खुसीको खबर ! चण्डेश्वरी-जलेश्वर हुँदै बौडेश्वर झरनासम्म पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण सुरु
काठमाडौं,असोज १० । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर १ ले शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको काखैमा पदयात्रा मार्ग निर्माण सुरु गरेको छ। आइतबार एक समारोहका बीच टोखा नगरपालिकाका मेयर प्रकाश अधिकारीले टोखा चण्डेश्वरी-
काठमाडौं,असोज १० । कोप–२६ मा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले तुलनात्मक रूपमा बढी असर पारेकोलगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी नेपालले गरेको छ । सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले समग्र
काठमाडौं,असोज ८ । सरकारले डेढ वर्षपछि पर्यटकका लागि नेपाल भ्रमण खुला गरेको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेपछि २०७६ फागुनदेखि सरकारले अनअराइभल भिसा दिन रोक लगाएको थियो ।
रुपन्देही,असोज ५ । पर्यटकसंग घुस लिएको आरोपमा रुपन्देहीमा एक प्रहरीसहित २ जना पक्राउ परेका छन् । रुपन्देहीको बेलहिया सीमा नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने ८ जना भारतीय पर्यटकसँग घुस लिएको आरोपमा